IPL 2022 – Ciyaartoyda aan kobcin ee la filayo in ay sii hayaan Chennai Super Kings xilli ciyaareedka soo socda - CricketInsta.com
Wasim Jaffer wuxuu dhaleeceeyay Virat Kohli aflagaadada aan loo baahnayn ee Jonny Bairstow
Pat Cummins waxa uu indhihiisa ku eegayaa xukunka qaarad-hoosaadka ka hor taxanaha weyn ee Hindiya sanadka soo socda
Hindiya vs England – Hindiya ayaa ku burburtay wejiga kubbadda gaaban ee la saadaaliyay ee England
Dhibcaha cricket-ka tooska ah
Horyaalka Hindiya IPL 2022
CSK waxay ka fikiraysaa inay koox ku yeelato IPL-ka Haweenka
Isbeddelka qaanuunka ee wax u soo kordhin kara IPL
IPL 2022 – Ciyaartoyda laga yaabo in laga siidaayo RCB xilli ciyaareedka soo socda
XARUNTA CIYAARAHA IPL 2022
IPL 2022 Miiska dhibcaha
IPL 2022 50-meeyadii ugu badnaa
IPL 2022 QAADAYAASHA WICKETKA UGU SAREEYA
IPL 2022 UGU BADAN
CIYAARAYAASHA IPL 2022 QARNIMO BADANA
IPL 2022 DHAMMAAN KOOXAHA ISKU GUDBINTA
Finalka IPL 2022 – Gujarat Titans vs Rajasthan Royals [Faallo toos ah]
IPL 2022 Isreebreebka 2 - Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals [Faallo toos ah]
IPL 2022 - Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore - Ciribtirka [Faallo toos ah]
Waqtiyada Qosol ee Dhulka - Sheldon Jackson vs Tim Southee | KKR
7 Maalmood Hal Daqiiqo - Juun 27 - Luulyo 3 | Hindida Mumbai
Isha Sawirka - Twitter
IPL 2022 – Ciyaartoyda aan koobi karin ee la filayo in ay sii hayaan Chennai Super Kings xilli ciyaareedka soo socda
Chennai Super Kings (CSK), oo afarta jeer ku guuleysatay IPL, ayaa xilli ciyaareed xun soo martay 2022. Afar guulood oo ay ka heshay 14 kulan oo horyaalka ah, horyaalka ayaa ku dhameystay kaalinta sagaalaad ee kala sarreynta dhibcaha. Waxaa xusid mudan in kooxda difaacanaysa ay seegtay isreeb-reebka markii labaad ee taariikhda IPL.
Xaraashku wuxuu awooday inuu helo adeegyada ciyaartoydeeda khibrada leh intii lagu jiray xaraashkii mega 2022, laakiin waxyaalaha qaar uma dhicin sidii loo qorsheeyay. MS Dhoni ayaa xilka ku wareejiyay Ravindra Jadeja ka hor inta uusan bilaaban tartankii 15-aad ee tartanka lacagta caddaanka ah, balse tallabadaasi ma noqon mid hirgasha, waxaana soo gaaray qaab ciyaareedka kooxda.
Intaa ka dib, Dhooni waxa loo soo celiyay kabtanimada badhtamihii tartanka, laakiin aad ayay u daahday, sababtoo ah in ciyaar kasta oo xaaladdaas lagu jiro guulaysato waxa ay ahayd mid aan suurtogal ahayn. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah ciyaartoyda da’da yar ayaa magacyo ku sameeyay qaab ciyaareedkooda qarsoon, waxaana ay si weyn u sheegeen inay ka mid yihiin kooxda IPL 2023.
Maqaalkan, waxaan uga hadli doonaa ciyaartoyda aan koobi karin ee la filayo inay sii hayaan Chennai Super Kings xilli ciyaareedka soo socda.
Number 1. Simarjeet Singh
Isha Sawirka – Twitter
In kasta oo ay tahay unug bowling-ga oo aan khibrad lahayn, CSK unugga bowling-ka degdega ah waxa uu ahaa mid ka mid ah dhibcaha yar ee kooxda ee IPL 2022. Simarjeet Singh waa kubbad-qaade degdeg ah oo si joogto ah u soo bandhigay si fiican fursado xaddidan. Simarjeet, sida Choudhary, ayaa aad loogu yaqaanaa kubbada lulaynta kubbadda cusub.
24-sano jir u dhashay Delhi waxa u saxiixay CSK xaraashka IPL 2022 mega qiimihiisii ​​aasaasiga ahaa ee INR 20 lakhs. Simarjeet waxa u suurtagashay in uu soo bandhigo tayadiisa oo uu ka yaabsado falanqeeye cricket-ka iyo taageereyaal badan oo kubbadda lulida ee caadiga ah inkasta oo ay jiraan fursado xaddidan. Ciyaar kasta ka dib, orodeeyaha ayaa u muuqday mid soo fiicnaanaya.
Simarjeet waxay qaadatay afar baaldi lix ciyaarood oo uu ku kacay 7.66 heerka dhaqaalaha. Ciyaartiisii ​​ugu fiicnayd xilli ciyaareedkan waxa uu ka horyimid Delhi Capitals, halkaas oo uu ku dhammaystay 2/27. Waxa uu sii waday ciyaartii gooldhalinta hoose ee uu ka hortagay Mumbai, halkaas oo uu ku soo bandhigay hibada kubbada cagta ee caadiga ah isaga oo uu weheliyo Choudhary. CSK waxa uu sii hayn doonaa adeegiisa xilliga IPL ee soo socda, daawashada Chahar, Choudhary, iyo Simarjeet oo wada jir ah waxay ahaan doontaa wax lagu farxo.
Nambarka 2. Mukesh Choudhary
Mukesh Choudhary shaki la'aan waa midka ugu muhiimsan ee CSK ee IPL 2022. Dhaqdhaqaaqa dhexdhexaadka ah ee gacanta bidix waxaa lagu xusay awoodda uu u leeyahay inuu kubada u salaaxo labada dhinac. Choudhary waxa uu magac u sameeyay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee IPL, isaga oo xirfadiisa kubada wicket-ka ku garaacaya kubada cusub taas oo ka dhigtay in uu aad uga dhex muuqdo kooxda ka dhisan Chennai.
25-sano jirku wuxuu ahaa hogaamiyaha wicket-ka ee Maharashtra ee 2020-21 Vijay Hazare Trophy. Xaraashkii super 2022, CSK wuxuu ku bixiyay INR 20 lakhs adeegyadiisa, taas oo caddaysay inay tahay wax ka beddelka macaamil ganacsi ee garabka-bidix, kaasoo ka soo qaaday saddex wikidood oo muhiim ah oo ka dhan ah xafiiltanka weyn ee Hindida Mumbai.
Choudhary wuxuu qaatay 16 wikidh 13 kulan oo uu ciyaaray celcelis ahaan 26.50. Waxqabadkiisii ​​ugu wacnaa waxa uu ka horyimid Sunrisers Hyderabad, halkaas oo uu ku qaatay 4/46 oo uu kooxda ka caawiyay guusheedii saddexaad ee xilli ciyaareedkan. Maqnaanshaha Deepak Chahar, goolhayaha da’da yar ayaa fursadda labada gacmood kaga faa’idaystay, wuxuuna u soo baxay beddelkiisa ku habboon. Soo laabashada Chahar sanadka soo socda, combo-du waxay halis u noqon kartaa kubbada cusub ee ka soo baxda labada daraf ee ka dhanka ah saf kasta.
Number 3. Mateesha Pathirana
Matheesha Pathirana waa kubbadaliye dheereeya oo Sri Lankan ah oo loo yaqaan "Junior Malinga" sababtoo ah ficilkiisa bowling-ka, kaas oo la mid ah midka Sri Lankan Lasith Malinga. 19-sano jirku waxa uu caan ka noqday Koobka Adduunka ee 2022-jirada 19, sababtuna waxa ay tahay ciyaartiisa kubbadda-bawlaha ee aan caadiga ahayn, taasoo uu hadda ku soo bandhigay tartanka ugu weyn adduunka ee T20, IPL.
CSK waxa ay saxeexday orodka gacanta midig si uu u noqdo bedelka xawaaraha New Zealand Adam Milne. Pathirana ma awoodin inuu booskiisa ka galo XI isla markiiba sababtoo ah waxaa jiray fursado kale oo badan oo kooxda ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la siiyay fursad uu ku ciyaaro kulankiisii ​​ugu horeysay ee IPL ee Gujarat Titans garoonka Wankhede Stadium, halkaas oo uu ku qaatay kubadii ugu horeysay ee Shubham Gill. Intaas waxaa sii dheer, isagoo kubad tartiib tartiib ah u soo tuuray goolkiisii ​​​​labaad, wuxuu ka saaray Hardik Pandya.
Laacibka reer Sri Lanka waxa uu ka soo muuqday laba ciyaarood oo keliya,laakin waxa uu wacdaro ka dhigay labadaba. Waxa uu awood u leeyahay in uu faa'iido u yeesho CSK sanadaha soo socda. Xirfaddiisu hadda way bilaabantay, wuxuuna baran doonaa marka uu waayo-aragnimo korodhsado. Dharbaaxada, ficilka aan caadiga ahayn had iyo jeer way adag tahay in la soo qaado waxayna u horseedi kartaa dhibaatooyin ka soo horjeeda garaacista. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Pathirana waxaa laga yaabaa in lagu arko qorshaha IPL 2023 ee CSK.
Jayawicrama waxa laga saaray imtixaankii labaad ee Australia sababtuna waa shaybaadh COVID togan
Bilow inaad qorto si aad u aragto natiijooyinka ama u garaac ESC si aad u xirto
Ku biir malaayiin kale oo la soco wixii u dambeeyay
Tag Appearance> Customize> Subscribe Pop-up si aad tan u habayso.